Sheekada filimka Stree: Shraddha iyo Rajkumar Rao filim wacan oo cabsi iyo shactiro isku jirto ayay heleen – Filimside.net
Sheekada filimka Stree: Shraddha iyo Rajkumar Rao filim wacan oo cabsi iyo shactiro isku jirto ayay heleen
Inta badan Bollywood-ka iskuma dayaan fariin ahaan inay sameeyaan cabsi iyo shactiri la isku dhex daray (Horror Comedy). Sanadkii hore taxanaha GOLMAAL AGAIN ayaa fariin ahaan cabsi iyo shactiro isku jiray wuxuuna noqday Blockbuster weyn balse isku day kale oo cabsi iyo shactiro isku jiray wuu fashilmay waana filimkii sanadkan bur buray NANU KI JAANU ee Abhay Deol hogaamiye ka ahaa.
Sidaa darteed kooxda filimka Stree waa geesiyaal waxay doorteen fariin inta badan Bollywood-ka ka cabsadaan madaama damaanad qaad loo heesanin filimada cabsida iyo shactirada isku jiraan inay daawadayaasha soo dhaweenayaan.
Jilaayaasha filimka Stree: Rajkummar Rao, Shraddha Kapoor, Aparshakti Khurrana, Abhishek Banerjee, Pankaj Tripathi
Qiimeynta fariinta filimkan: 3.5/5 (Sedex xidig iyo bar)
Muxuu Ku Wanaagsan Filimka Stree: Qaabka sheekada loo dhigay oo la isugu miisaamay cabsida iyo shactirada una dheer tahay bandhiga jilaayaasha sameeyeen.
Muxuu Ku Liitaa Filimka Stree: Waa filim reer magaalka loogu tala galay oo fariintiisa xadidan tahay sidoo kalena mada daalo dhameestiran malahan waa macquul in gobolada qaar dadka ku nool soo dhaweynin.
Fariinta Filimka Stree Oo Kooban: Stree waa haweeney aan la arkin oo reer aaqiraad ah taasi oo xiliyada feestooyinka jiraan tuulooyinka imaato inta badana ragga ay u dhawaaqo wadato haddii ay usoo jeestaan.
Vicky (Rajkummar Rao) waa dawaarle ama harqaanle deegaankiisa laga jecel yahay sidoo kalena aan aaminsaneyn quraafaadka ah in Stree ay jirto wuxuuna maalin jeclanayaa gabbar aan deegaanka laga aqoonin balse u timid inay feestada Pooja ka qayb qaadato waana (Shraddha Kapoor).
Vicky (Rajkummar Rao) saaxiibadiisa ayuu u sheegaa gabadha uu jecel yahay balse qof garto ayaa la weynaa weliba labadiisa saaxiib Jana (Abhishek Banerjee) iyo Bittu (Aparshakti Khurana) ayuu xogtiisa gaarka ah la wadaagayaa.
Bittu (Aparshakti Khurana) oo shaki badan ayaa baadi goobayo xogta gabadha aan la aqoonin ee saaxiibkiis Vicky jecel yahay kadibna saaxiibadiisa wuxuu u sheegaa gabadha Vicky jecel yahay inay reer aaqiraad tahay weliba ay taha Stree oo sanadkii mar soo baxdo xiliga feestada raggana dhibaateyso!
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka Stree: Raj Nidimoru, Krishna DK iyo Pawan Sony sheekada filimka Stree si wacan ayay u qoreen oo aan laga xiiso dhigeyn sidoo kalena Director Amar Kaushik isagana shaqadiisa kowaad si heer sare ah ayuu isugu daba riday madaama filimkan cabsida iyo shactirada la isugu dheeli tiran si wacan.
Bandhiga Jilaayaasha: Rajkummar Rao lama buun buuniyo balse waa atooraha kaliya ee xiligan Bollywood-ka heestaan kaasi oo fariin walbo si qurux badan kaga baxsan karo weliba Stree aqoonsi weyn ayuu kusii heli doonaa madaama uu doortay fariin halisteeda wadato laakiin qofkii halis u bareero ayaa amaan badan badalkeeda helo!
Shraddha Kapoor wey soo laabatay quruxleydaan sidoo kalena door adag ayay ka qaadatay filimka Stree waxayna muujisay atoore kasto oo jiilka hadda ka mid ah inay la jaan qaadi karto.
Wiilka dhalinta yar Aparshakti Khurrana isagana doorkiisa waa mid xiiso leh weliba filimak Stree wuxuu ka mid yahay kuwa sida wacan kuugu mada daalinayaan.
Gunaanad: Stree fariintiisa Bollywood-ka aan ku badneyd isku daygii la sameeyay laguma qasaarin madaama si qurux badan sheekadiisa la isugu daba riday waa hubaal reer magaalka inay siweyn kaga heli doonaan filimkana waa mid ganacsi wacan sameyn doono marka laga eego filim sheekadiisa wacan tahay inuu yahay.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Stree ee cabsida iyo shactiro isku jiro ah haatana fariintiisa la wada amaanayo:
Waxaa Aqrisay 1,164
FILIMKA TIK TIK TIK natiijadiisa ii sheeg pleas